News - Siemens waxay soo saartay shirkad muuqaal ah oo isle'eg oo gacan-ka-geys ah si ay gacan uga geysato kor-u-qaadista dhammaan nidaamka otomaatiga ee xarunta kala-soocidda saadka ee Shiinaha
• Hal abuur hal abuur oo muuqaal ah oo loogu talagalay suuqa Shiinaha
• Codsiga waxqabadka sare oo si buuxda otomaatig u ah teknoolajiyada kala-goynta hal xabbo oo ku saleysan nidaamyada aragtida caqliga farsamada (AI)
• Shuruudaha boosaska yaryar iyo is-dhexgalka fudud ee nidaamyada jira
Shirkadda Siemens waxay sii ballaarisay kala duwanaanta wax soo saarkeeda ee xarumaha kala soocida xirmooyinka iyadoo la horumarinayo qalab aad u fara badan oo suuq geyn u leh suuqa Shiinaha. Isbadalkeeda farsamo wuxuu ku saleysan yahay tiknoolajiyada kala-soocida muuqaalka muuqaalka ee muuqaalka ah ee muuqaalka muuqaalka ah ee muuqaalka hal-jeex leh ayaa leh shuruudo yar oo boos ah waxaana si dabacsan loogu dhex-dari karaa qaab-dhismeedka cusub iyo kan hadda jira. Aag ka yar 7 mitir laba jibbaaran , xalkan caqliga badan, oo si otomaatig ah u shaqeynaya wuxuu kala saari karaa ilaa 7,000 baakado yaryar saacadiiba, marka lagu daro in si deg deg ah oo habsami leh looga baaraandego tiro aad u tiro badan oo baakado ah oo cabirro kala duwan leh, qaabab ah, iyo qalab wax lagu rido, diyaarna u ah talaabooyinka xiga ee habka kala soocida. Siemens SEPARATOR hal-gabal ayaa si weyn looga isticmaalay adduunka, iyo kala-soocaheeda cusub ee istiraatiijiga ah ayaa sidoo kale si guul leh looga codsaday Shiinaha.
Ye Qing, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Siemens Logistics Automation Systems (Beijing) Co., Ltd. ayaa yidhi "Iyada oo la adeegsanayo qalab istiraatiijiyadeed oo isle'eg oo hal-gabal ah, macaamiisha ayaa ka faa'iideysan kara keydka booska iyo sidoo kale tikniyoolajiyad wax ku ool ah." waxay si weyn u kordhineysaa heerka otomatiga ee nidaamyada, iyagoo ka caawinaya shirkadaha saadka inay kordhiyaan awoodooda wax qabad isla markaana ay kaydiyaan kharashaadka. ”
Shirkadda 'Siemens' oo si buuxda otomaatig u ah kala-soocayaasha muuqaalka ah ayaa dib-u-habayn ku samaynaysa baakadaha dhinac-dhinac u socda socodka hal qayb oo isdaba-joog ah oo leh kala-goyn goos goos ah.Tani waxay u diyaarin doontaa xirmada tallaabooyinka soo socda ee soo socda sida iskaanka, miisaamidda iyo kala-soocidda. kala-bixiyaha muuqaalka ah ee hal-gabal ah waa nidaam aragti adag oo ku saleysan AI kaas oo si sax ah u ogaan kara qaabka, cabbirka iyo goobta xirmo kasta Macluumaadkan waxaa loogu gudbiyaa waqtiga dhabta ah nidaamka xakamaynta, kaas oo go'aamiya halbeegyada kala-goynta hal-xabbo oo hagaajiya xawaaraha suumanka shakhsiga ah ujeedka ugu dambeeya waa in lagu gaaro xakamaynta saxda ah ee xirmada booska ugu yar iyo kala go 'iswada si buuxda otomaatig ah.
Marka lagu daro kala-soocayaasha isku-dhafan ee muuqaalka ah, kala-soocayaasha halbeegga muuqaalka ah ayaa lagu heli karaa laba qaabeyn: xirmo kala-gooyeyaal isku-dhafan oo kala ah Visicon Polaris (xirmooyinka waaweyn iyo kuwa culus) iyo kuwa yar-yar oo muujiyaal ah oo isku-dhafan Visicon Capella (oo yar yar) iyo xirmooyinka fudud).
Siemens Logistics Automation (Beijing) Co., Ltd. waa shirkad gebi ahaanba iska leh Siemens Logistics ee Shiinaha, oo xarunteeduna tahay magaalada Beijing. Iyada oo leh awoodda maxalliga ah, Siemens waxay macaamiisha siin kartaa xalal wax soo saar iyo tiknoolajiyad hoggaamineed, adeegyo tayo leh iyo dhammaystirka hirgelinta mashruucyada maxalliga ah.